‘साधना, लगनशीलता र धैर्यतामा विश्वास गर्छु, मौलिकतामा रमाउँछु’ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
काठमाडौं । गायिका प्रमिला पुन नेपाली गीत सङ्गीत क्षेत्रका लागि नौलोे नाम होइन । उनको स्वरले सजिएका करिब २ दर्जन गीत सार्वजनिक भइसकेका छन् । दाङको तुलसीपुरमा विद्यार्थी जिबन बिताएकी प्रमिलाको सानैदेखि नाँच्न र गाउनमा लगाव थियो । अझ बढी संगीत हावी थियो । जतिबेला पनि गीत गुनगुनाइरहन्थिन् । विद्यालयमा हुने कार्यक्रममा पनि प्रस्तुति दिने गर्थिन् । त्यहिबाट नै उनको मनले संगीत क्षेत्र रोजिसकेको थियो । नाँच्दा गाउँदा परिवारबाट कहिले विरोध भएन तर यसमै भविष्य बनाउ भनेर प्रोत्साहन पनि थिएन । तर आफ्नै अन्तरमनबाट जागृत भएको दृढ ईच्छाशक्तीले उनलाई नेपाली संगीतको पथमा डो¥याएरै छाड्यो । यतिबेला उनको नाम गायिकाहरुको पक्तिंमा स्थापित भइसकेको छ । अहिले उनलाई परिवारबाट पूर्ण साथ र समर्थन मिलेको छ ।
प्रमिलाले वि.सं. २०६२ मा ‘माकुरीको जाल जस्तो’ बोलको गीत रेकर्ड गराएर सांगीतिक क्षेत्रमा औपचारिक यात्रा सुरुवात गरेकी हुन् । त्यसपछि ‘छप्प रुपैयाँ’बोलको तीज गीत सार्वजनिक गरिन् । उक्त गीतबाट आंशिक सफलता प्राप्त गरेपछि लगातार गीतहरु निकालिरहिन् ।
उनको चर्चामा आएको पहिलो गीत ‘चौरीको गोठ’ हो । जसमा शिव संगम राईको रचना र सुन्दर लामाको संगीतमा रहेको थियो । गीतको म्यूजिक भिडियो पनि उतिकै चर्चा भएको थियो । क्रान्ती केसीले निर्देशन गरेको भिडियोमा दुर्गेश थापा र रचना लामाको अभिनय रहको थियो । गीता घर्तिको शब्द रहेको गीत ‘रातो सारी लकाई लर्काई’ ले पनि उनलाई गायिकाको रुपमा स्थापित गर्यो । हरेका वर्षको तीजमा पनि गीत बजारमा ल्याउँदै आएकी छन् । उनको ‘छप्प रुपैयाँ’ पहिलो तीजगीत थियो । त्यसपछि ‘तीजको सेरोफेरो’ कम्मर मर्काउँदै, रातो सारी लरक्कै पारी, तीजै आयो वर्षेनि चर्चामा रहेका गीत हुन् । बाबुल गिरीको शब्द र संगीत रहेको तीज गीत ‘कम्मर मर्काउँदै’ पनि पनि उनको रूचाइएको गीत हो ।
प्रमिला भर्सटायल गायिका हुन् । उनले लोक, पप र आधुनिक सबै विधाका गीतहरु गाएकी छिन् । ती सबै गीतमा उनको स्वर ‘म्याच’ भएको पाइन्छ । उनले ‘बिहानी पहिलो किरणले’ बोलको आधुनिक गीत पनि २ वर्ष अगाडि बजारमा ल्याइन् । देब पुनको शब्द र संगीत रहेको उक्त गीतबाट पनि उनले राम्रो प्रतिक्रिया पाउन सफल भइन् । यो गीतले उनलाई नयाँ उचाईमा पू¥यायो । उनको स्वरमा रहेको ‘गुन्यु चोली सजाएर’ बोलको राष्ट्रिय भावको गीत पनि उतिकै कर्णप्रिय र मर्मश्पर्शी छ ।
दुई दर्जन बढी गीतमा स्वर भरिसकेकी प्रमिला गीत मात्रै गाउँदिनन्, लेख्छिन् पनि संगीत पनि भर्छिन् । उनको शब्द, संगीत र स्वर रहेको गीत हो ‘तीजै आयो’ । उक्त गीतमा उनले लोकप्रिय मोडल करिष्मा ढकालको साथमा मोडलिङ पनि गरेकी छिन् । गीत–संगीतको क्षेत्रमा रमाइरहेकी छिन् । संगीत क्षेत्रमा नै करिअर बनाउन चाहनाले उनले दिनेश थापासँग ‘सारेगम’ सिकिन् । त्यसपछि चण्डीप्रसाद काफ्लेसँग संगीतको ज्ञान लिइरहेकी छिन् । आफ्नो स्वरमा निखारता ल्याउँन अनवरत साधना गरिरहेकी छिन् ।
प्रमिला संगीतमा मौलिकपनलाई मन पराउँछिन् । त्यसैले त उनका गीतमा मौलिकपन हुन्छ । भड्किलो हुँदैन । उनी क्षणिक चर्चाका लागि सांगीतिक क्षेत्रलाई धुमिल बनाउनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छिन् । ‘तर आजकाल कतिपयले आफ्नो व्यक्तिगत चर्चाका लागि संगीत क्षेत्रलाई दुषित बनाएको पाइन्छ । यस्तो देख्दा दुःख लाग्छ ।’– उनी भन्छिन् । आफूमा भने चर्चाको भोक कहिले पनि नरहेको बताइन् । भन्छिन्–‘गायक गायिकाले साधना, लगनशीलता र धैर्यतामा मात्र ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।’ निरन्तर साधना र संघर्ष पश्चात उनले सफलता पनि हात पर्दै गइरहेकी छिन् । थुप्रै अवार्ड समेत चुमीसकेकी छिन् । ‘स्टार ईन्टरनेशनल म्यूजीक अवार्ड’ ‘छायाँछवी तीज म्यूजिक अवार्ड’, नाट्यश्वर अवार्ड लगायतका अवार्ड हात पारिसकेकी छिन् ।
सांगीतिक कार्यक्रमकै सिलसिलामा दुबई पुगेकी छिन् । यसो त थुप्रै कार्यक्रमका लागि निम्तो आएको तर आफुले समय दिन नसकेको बताउँछिन् । ‘म एक गायिकासँगसँगै गृहिणी पनि हुँ । घर व्यवस्थापन गर्नु मेरो प्रमुख दायित्व र जिम्मेवारी हो । यसैले टाढा आयोजना हुने कार्यक्रममा समय दिन सकिनँ । तर अब घर र सांगीतिक क्षेत्र दुबैलाई व्यवस्थापन गरेर अगाडि बढ्ने छु ।’ प्रमिलाले कारण सहित जवाफ दिइन् ।
सालिन र मिलनसार व्यवहारकी धनि प्रमिलाले पछिल्लो कोशेली ‘दशैं आउँदा, तिहार आउँदा’ हो । उक्त गीतमा उनले गायिका रेश्मा के बोम्जन, गायक प्रदिप ग्लान’ र डी जे मेवाहाङसँगको सहकार्य गरेकी हुन् ।
आफ्नो करियरलाई निरन्तरता दिने प्रण गरेकी छिन् । उनका थुप्रै गीतहरु सार्वजनिकका लागि तयारी गरिहेकी छिन् । प्रदिप लामासँगको सहकार्यमा ‘मायालु भनि बोलाउँ भने’ बोलको गीत चाँडै ल्याउँदैछिन् ।
-म्यूजिक खबर पाक्षिकबाट